४ वर्ष सम्म वि`द्युत प्राधि`करणमा पुन: कुलमान घि`सिङ्ग रहन सक्ने ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/४ वर्ष सम्म वि`द्युत प्राधि`करणमा पुन: कुलमान घि`सिङ्ग रहन सक्ने !
नेपाल विद्युत प्रा`धिकरणको कार्यकारी निर्दे`शकको पदममा कुलमान घिसि`ङलाई निरन्तरता दिइ सक्ने सं`केत देखिएको छ । आज बस्ने मन्त्रि परिषद बैठकले घिसि`ङलाई नै प्राधिक`रणको प्रमुख पदमा निरन्तरता दिने निर्णय गर्ने स्रो`तको दाबी रहेको छ ।
बैठकले घिसि`ङको कार्य`काल पुनः थप गर्ने बताइएको छ । मन्त्रि परिषदको बैठक सुरु भएको छ । प्रधान मन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भर्खरै बैठक सुरु भएको प्रधान मन्त्री के पी शर्मा ओलीका प्रेस सल्ला`हकार सूर्य थापाले जानकरी गराएका छन् ।
यो नियमित बैठक हो । कोरोना संक्र`मणको जोखि`म बढिरहेकोले रोक थाम तथा नि`यन्त्रण सम्बन्धी मह`त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने बुझि`एको छ । साथै कुलमानलाई नै निरन्तरता दिने ‍‍‍‌औप`चारिक जानकारी आउने बताइएको छ ।
जनस्तरबाट चर्को दवाव परेपछी आलोचित हुने डरले सरकारले कुलमानलाई नै निर`न्तरता दिने संकेत देखाएको हो । ४ वर्ष अगाडी नियुक्त भएका कुल मान घिसि`ङ्गको कार्यकाल अब केही दिन बाँकी रहँदा कार्य कारी निर्दे`शक हुन धेरैको दौडधुप रहेको समाचार यस अगाडी नै प्रका`शित भैसकेका छन् ।
‘मृ,तक र सङ्क्र,मितको विवरण सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश